Amandla amdaka | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ihlala ithethwa nge amandla grey ukubonisa ukuba ifuthe okusingqongileyo yemveliso, umzekelo, okanye into, ayikhawulelwanga kumacandelo ayo. Ewe amandla angwevu «Amandla afunyanisiweyo»NgesiNgesi, ichaza amandla angabonakaliyo, kwaye afakiwe kuloo nto isixhobo.
La amandla grey Iyahambelana ke nomthamo wamandla ayimfuneko ukuvelisa imveliso elungileyo okanye a izinto, kwaye iboniswa kumanqanaba aliqela:
Kulo ukuvelisa yemveliso okanye yezinto;
ngexesha le isicando izinto zokwenza imveliso;
ngexesha le zokuthutha kwezi zinto zingaxutywanga;
kutshintsho lwe impahla abazala kunye nokuveliswa kwemveliso yokugqibela;
ngexesha le ukuthengisa ukusuka kwinkonzo;
ekusetyenzisweni kwemveliso okanye kuyo ukusetyenziswa;
ngexesha le Ukurisayikilisha
Amandla angwevu we izinto, izixhobo okanye inkonzo, yenziwe ngamandla amabini angwevu kuwo wonke umjikelo we umsebenzi wobomi okanye emva kwakhe. Amandla angwevu angenakuhlaziywa, oko kukuthi, a amandla kusetyenzwe (igalelo lamandla ayimfuneko kwinkqubo yokuvelisa kunye neyolondolozo ngexesha lomjikelo wobomi) kwimvelaphi engenakuhlaziywa, kunye amandla grey ehlaziyekayoOko kukuthi, amandla asetyenzisiweyo emvelaphi evuselelekayo.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ihlathi lokuqala lehlabathi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Ukusetyenziswa kwakhona » Yintoni amandla angwevu
Ukuphela kobutyebi bendalo